Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 09
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 09
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 09
RUKA 9:1 Zvino wakavunganidza vanegumi navaviri, akavapa simba nechikuriri, pamusoro pemweya yakaipa yose, nokuporesa kurwara.
2 Akavatuma kuparidza vushe bwaMwari, nokuporesa kurwara.
3 Akati kwavari: Musatongotora zvemunzira, kana mudonzvo, kana hombodo, kana chingwa, kana mari; musava nenguvo mbiri.
Vadzidzi vaive varombo vairarama nokutenda.
RUKA 9:4 Imba ipi neipi yamunopinda mairi, garai’mo mugozobvapo.
5 Vuye vose vasingakugamuchiriyi, kana mobva paguta iro, muzunze guruva riri patsoka dzenyu, chive chapupu kwavari.
6 Ipapo vakabva, vakapota nemisha, vakaparidza Evangeri, nokuporesa panzvimbo dzose.
Mambo Herode vaive vauraya Johane Mubhabhatidzi apa akabva atanga kushushikana. Kunyange vanhu vakaipa vanoshushikana kana Jesu akasvika panzvimbo.
RUKA 9:7 Zvino Herode mubati, wakanzwa zvose zvakanga zvichiitwa, akakanganiswa; nokuti vamwe vakanga vachiti Johane wakamuka kuvakafa;
9 Herode akati: Johane ndakamugura musoro; zvino ndiyaniko uyu, wandinonzwa zvinhu zvakadai pamusoro pake? Akatsamwa kumuvona.
Nekuuraya Johane Mubhabhatidzi, aive akazadzwa neMweya Mutsvene, Herode aive amhura Mweya Mutsvene chinova chivi chisingaregerereki.
Saka Jesu, Shoko, haana kubvira ataura naHerode.
Jesu akabva asarudza kupa vanhu zviuru zvishanu chekudya murenje.
RUKA 9:13 Asi iye akati kwavari: Muvapei imi vadye, vakati: Isu hatinezvingwa zvingapfuura zvishanu, nehove mbiri, asi kana tikaenda kundotengera vanhu ava vose zvokudya.
14 Nokuti vaiva varume vanenge zvuru zvishanu. Akati kuvadzidzi vake: Vagarisei pasi vaite mapoka anavanhu vanenge makumi mashanu.
15 Vakaita kudaro, vakavagarisa vose.
16 Ipapo akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri, akatarira kudenga, akavonga, akazvimedura, ndokupa vadzidzi kuti vaise pamberi pavanhu vazhinji.
Munana uyu unomiririra nguva nomwe dzemakereke dzekereke yemaHedeni.
Jesu akapa zvekudya kuvadzidzi. Vadzidzi vakapa zvekudya kuzvikwata zvakasiyana zvevanhu. Izvi zvinomiririra makore 2000 enhorondo yekereke apo Jesu anokurudzira vadzidzi kunyora Testmente Itsva, uye dzidziso idzodzo dzinozoparidzwa kune chero zvikwata zvevanhu vanoungana sevatendi munzvimbo dzakasiyana siyana munguva dzemakereke dzakasiyana. MaKristu ese akadzidza chokwadi cheBhaibheri kubva pane zvakanyorwa pakutanga kwenguva yekereke yekutanga. Testamente Itsva ndiyo nheyo dzekereke. Tinokwanisa chete kudzidza pamusoro paMwari kubva pane zvakanyorwa muBhaibheri.
Ndudzi nomwe dzekutanga dzechikafu dzinomiririra nguva nomwe dzemakereke. Hove inotuhwina mumvura inomiririra kereke yakavanzwa mukati menguva yakaoma Nguva yeRima yekuuraiwa kwevatendi mukereke yechitatu neyechina. Chingwa chinomiririra dzidziso dzemuBhaibheri dzaive nheyo dzedzimwe nguva shanu dzekereke.
RUKA 9:17 Vakadya vakaguta vose; vakavunganidza zvimedu zvavakanga vasarirwa nazvo, matengu ane gumi namaviri.
Kupa kudya kuvane zviuru zvishanu kunomiririra dzidziso dzevadzidzi dzaizopiwa kuzvikwata zvakasiyana zvemaKristu mukati memakore 2 000 enhorondo yekereke. Pakupedzisira, vakafa muna Kristu vanomutswa, maKristu oenda Kudenga naIshe Jesu Kristu paKuuya kwake. Evangeri rodzokera kumarudzi gumi nemaviri evaIsraeri munguva yekutambudzika kukuru. Mosesi naEria vachapa kudya kwavari nenzira imwechete yakaita Testamente Itsva. MaJuda vachapedzisira vakutenda zvimwehete nezvakatendwa nekereke yemaHedeni. Vachadya chekudya cheMweya chimwechete chakatendwa nekugutsa mweya yevaive mukereke.
RUKA 9:18 Zvino wakati achinyengetera ari oga, vadzidzi vake vakanga vanaye; akavabvunza, achiti: Vanhu vazhinji vanoti ndini aniko?
19 Vakapindura vakati: Vamwe vanoti; Johane Mubhabhatidzi, vamwe Eria, vamwe zve, kuti mumwe wavaporofita vakare wamuka.
Pavakabvunzwa kuti vamwe vanhu vanofungei, vose vakadaira. Vanhu vanofarira kubata mashoko panotaura vamwe vanhu. Vanotya kutenda zvinhu zvichibva pakutaura kwavo. Isu vanhu tinosarudza kuva seshiri yeparoti torarama tichidzokorora kutaura zvatakanzwa.
RUKA 9:20 Akati kwavari; Ko imi munoti ndini ani? Ipapo Petro akapindura akati; Ndimi Kristu waMwari.
Pavakabvunzwa kuti ivo vaifungei pachavo, Petro ndiye oga aive nezaruriro pachake yekuti Jesu aive ani. Ndiye oga akadavira.
RUKA 9:21 Akavavudza zvikuru nokuvaraira kuti varege kuzivisa munhu izvozvo;
Jesu akavaudza kuti vanyarare. MaJuda vaive munzira yavo yekubva pachokwadi chaMwari. Vadzidzi vaive vachizotanga kereke yemaKristu. Saka paive pasina basa nekuti vaudze maJuda zvinhu zvavaisazotenda mazviri.
RUKA 9:22 Achiti: Mwanakomana womunhu unofanira kutambudzika zvizhinji; nokurashwa navakuru, navaprista vakuru navanyori, nokuvurawa, nokumutswa nezuva retatu.
Vaive kure kwazvo nekubvuma kuti Jesu aive Mwari pachake mumuviri, maJuda vaizomuvuraya.
Ndapota tarirai kuti vakuru vechitendero ndivo vakaramba Kristu. Vakabva vakurudzirawo veruzhinji.
Pavatungamiri ndipo pega pakarasika maJuda uyezve pacharasika kereke.
RUKA 9:23 Zvino wakati kunavose: kana munhu achida kuvuya shure kwangu, ngaazvirambe, asimudze muchinjikwa wake zuva rimwe nerimwe, anditevere.
MaKrustu anofanira kufa kuzvivi. Zvido zvenyama zvinofanira kufa mumunhu. Muchinjiko unoreva kutambudzika. Zvino maKristu haafaniri kutevera hutungamiri hwemunhu, asi Jesu oga, anova Shoko. Hatifaniri kutenda chinhu kunze kwekunge chakanyorwa muBhaibheri raMwari.
RUKA 9:24 Nokuti aninani unoda kuponesa vupenyu bwake, ucharasikirwa naBwo; asi unorashikirwa novupenyu bwake nokuda kwangu, uchabwuponesa.
Mwari ane Muono mukuru, muono uyu rwizi rwemweya rwehurongwa hwaMwari runoyerera mukati mezviitiko zvehupenyu hwevanhu. Mumwe nemumwe wedu ane kadziva kake kaduku kezvido zvake zvekungofunga nezvake iye oga. Kana tikazvigutsa nekurova mvura ichibuda mudziva kuti tizvifadze, ipapo tinofa pamweya. Kana tikapa zvino zvedu kuna Mwari tofa kuzvido zvedu zvenyama, ipapo chete ndipo patinozosairirwawo tichipinda murwizi rwaMwari runozotiyeredza tichienda kurutivi rwatisingazivi uye rwatisingade kuenda. Asi rwizi urwu ndiyo yega nzira inoenda kurugare. Kana tisina kufa kuzvido zvedu tinopedza nguva yedu tichiedza kubuda murwizi urwu.
RUKA 9:25 Nokuti munhu uchabatsirweiko, kana awana nyika yose, akazvirasha nokuzvitadzira?
Vakadzi. Mari. Mbiri. Zvese zvatinowana panyika ino ndezvenguva duku. Hatiende nazvo. Hazvina maturo kudaidzwa kuti mupfumi uri muguva.
RUKA 9:26 Nokuti aninani unonyara pamusoro pangu namashoko angu, Mwanakomana womunhu uchanyara vo pamusoro pake musi waanovuya nokubwinya kwake nokwaBaba, nokwavatumwa vatsvene.
Tinofanira kurwira Shoko raMwari. Makereke akabva akapinda mutsika, dzidziso dzevanhu nekumwe kutadza kuzhinji. Tinofanira kugara nezvakanyorwa, zvinoreva kusatenderana nekereke yenyu yamunodisisa, vatungamiri vekereke yenyu vakanaka, uye mhuri dzenyu. Haisi nzira iri nyore kutevera. Zvinongoenderana nekuti ndiyani anouya pekutanga muhupenyu hwako.
Chiitiko chekubwinya kwaJesu pagomo chinomiririra kupera kwenguva nomwe dzemakereke. Kuuya kwaIshe kune zviitiko zviviri zvinoenderana nechiitiko ichi. Vakafa muna Kristu vachatanga kumutswa. Ava ndivo vatsvene vose kubva munguva nomwe dzese dzekereke. Mumashure maizvozvo vatendi vanenge vachiri kurarama vanobva vashandurwa vopiwa miviri mitsva. Ipapo vose vanobva vakwira kudenga kunosangana naShe Jesu Kristu, voenda naye kumutambo wemuchato neGwaiana Kudenga.
Maprofita maviri, Mosesi naEria vachatora Evangeri kuenda naro kumaJuda munguva yeKutambudzika kukuru.
RUKA 9:27 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Vamwe varipo kunavamire pano vasingazonzwi rufu, vasati vavona vushe bwaMwari.
Vadzidzi vaviri vaizoona Kuvuya kweChipiri kwaJesu kuchiratidzirwa paKubwinya kwaJesu paGomo.
RUKA 9:28 Mashoko iwayo akati apera kutaurwa mazuva anenge masere, akatora Petro naJohane naJakobo, akakwira mugomo kundonyengetera.
Mazuva manomwe akadarika. Zvichireva nguva nomwe dzemakereke dzichapera. Zuva rechisere (chiverengo chechisere chinomiririra zvinhu zvitsva) richamiririra kutanga kwenguva yekutambudzika kukuru. Izwi rekuti “anenge” kubatanidza sezvo paine kutangidza kwenguva apo nguva dzemakereke dzinopera nguva yeKutambudzika kukuru ichitanga.
RUKA 9:29 Zvino wakati achinyengetera, mugarire wechiso chake ukashanduka, nguvo dzake dzikachena dzikapenya.
Chiitiko cheshanduko inoshamisa chakaitika. Izvi zvinomiririra kumuka kwevatsvene mumiviri isingavori uye kushandurwa kwekereke inorarama kuva nemiviri isingavori.
Jesu akapenya nokubwinya kunoshamisa kusina munhu anovora angafanane nako. Izvi zvinoratidza kuti ari pamusoro pevanhu vose, uye kuti hakuna munhu angaenzaniswe naye.
RUKA 9:30 Zvino tarira varume vaviri vanaMosesi, naEria
Jesu aive nekubwinya kukuru kwakaita kuti kuonekwe vaprofita vakuru vaviri ava, vaingova vanhu. Jesu akakura kudarika munhuwo zvake. Mwari wemasimba ose aive maari aipenyera kumushandura.
Mosesi aimiririra kumutswa kwevatsvene vakafa mukati menguva nomwe dzemakereke, nekuti akafa.
Eria haana kufa, saka anomiririra kereke inorarama pakupedzisira vachashandurwa miviri yavo.
Asi mweya waEria takavimbiswa kuti uchadzoka pakupera kwenguva yekereke yemaHedeni kuzodzosera zvinhu panzvimbo pakutenda kwechipostora kwekereke yekutanga sezvazvakanyorwa muTestamente Itsva.
MATEO 17:11 Akapindura akati: Eria uchauya zvake avandudze zvinhu zvose.
Johane Mubhabhatidzi akauya mumweya waEria. Asi apa Johane aive afa. Saka ichi chaive chiporofita chezvinhu zvichauya.
Saka pakupedzisira kuchava nehushumiri hwakaita sehwaEria kuti hutendeutsire vatendi vemazuva ekupedzisira kudzidziso dzeTestamente Itsva dzaive dzarasika mukati menguva yeRima. Rumutsiridzo urwu ruchagadzirira vatendi kuti vagogona kukwira kudenga vasangane naShe mumakore pakuuya kwake.
RUKA 9:31 Vakavonekwa vachibwinya, vakataura zvokuenda kwake,kwaakanga ondopedzisa paJerusarema.
Mosesi naEria vakavonekwa mukubwinya asi vaiuya kuzotaura pamusoro pekufa kwake. (Kubwinya kwedu kukuru semaKristu kunouya kana tagona kufa kuzvido zvemoyo yedu). Calvari ndicho chiitiko chikuru cheKuuya kwake kweKutanga, sezvo kwakawana ruponeso rwavose maJuda nemaHedeni saka kwakagadzira Kuuya kwake kweChipiri nekubwiya kukuru.
Mumashure mekukwira kwekereke kudenga, Mosesi naEria vachatora Evangeri vodzokera naro kumaJuda munguva yeKutambudzika kukuru. MaJuda 144 000 vachagamuchira Jesu saMesiasi, vobva vafa.
Saka zviiitiko zvenguva yekupedzisira paKuuya kwaShe zvinopfupiswa nechiitiko chekubwinya kwaJesu pagomo.
RUKA 9:32 Zvino Petro, navaiva naye, vakanga vabatwa nehope; asi vakati vachipepuka, vakavona kubwinya kwake, navarume vaviri vamire naye.
Mufananido wevasikana vane gumi: Vose vaive mhandara dzakachena- makereke emaKristu akaponeswa. Asi vose vaive vakarara muchato usati watanga. Kudanidzira kukuru kwakavamutsa- Eria akauya kuzodzosera kereke pakutenda kwemadzibaba mapostora eTestamente Itsva.
Saka panokwira kereke kudenga, maporofita maviri aya (Mosesi naEria) vanotora Evangeri voridzosera kumarudzi gumi nemaviri eIsraeri munguva yeKutambudzika kukuru, kuti vavagadzirire Kuuya kwaJesu kuvaJuda 144000.
RUKA 9:33 Zvino vakati voparadzana naye, Petro akati kuna Jesu: Tenzi, zvakanaka zvatiri pano ngativake matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMosesi, rimwe raEria, asingazivi zvaanoreva.
Mweya wetiriniti wakabva wazadza Petro. Kuneta kukuru kuri muvanhu ndirwo rudo rwekusimudzira vanhu vane mbiri vanoshandiswa naMwari. Tarirai kutadza kukuru uku. Petro ari kuisa vanhu vaviri vane mbiri pachinzvimbo chimwechete naJesu.
Mweya wekereke wakabva wabatawo Petro. Aida kuita tebarnekari kana kuti kereke mumazita evanhu vaMwari vane mbiri. Kereke yeLutheren kana tabernakeri. Kerreke yekwa Wesley kana tabernakari. Uyu ndiwo mweya wemasangano wakapedzisira waparadzanisa maKristu kuva masangano emakereke 30 000 akasiyana uye mamwe asina mazita.
Vatendi “veMharidzo” vazhinji vanoisa mazwi akataurwa naWilliam Branham voti akaenderana neMagwaro. Vamwe vanototi mazwi akataurwa akabatwa aya ari pamusoro peMagwaro.
Hamuna zaruriro yamunowana kumazwi akataurwa aya kunze kwekunge maatsigira nemavhesi emuBhaibheri.
Kutadza kwaPetro kukuru kwaive kupa zano kuna Jesu. Tinofanira chete kutenda kuBhaibheri kwete kuedza kurivandudza. Mwari haade mazano edu kana rubatsiro rwedu.
RUKA 9:34 Wakati achataura izvozvo, gore rikavuya, rikavafukidza; vakatya vachipinda mugore.
Gore dema rakabva rafukidza panzvimbo yavaive kuratidza kuipa kwezvaive zvataurwa naPetro. Vadzidzi vatatu vakabatwa nekutya kunova kuita kunotarisirwa pamberi paMwari. Mukati mekutya tinoteerera zvakanyanya kukunda kutaura.
Gore rinoburuka pagomo rinoonekwa riri mhute yakasviba kwazvo zvekuti munhu anoshaiwa nzira obva arasika. Izvi ndizvo zvinoitika kwatiri vanhu kana tikaedza kufananidza munhu naJesu. Kutaura kuti Mosesi kana Eria kana William Branham vanofananidzwa naJesu zvinongoratidza kuti takarasika mumhute yekusatenda.
RUKA 9:35 Ipapo inzwi rakabva mugore, richiti: Uyu Mwanakomana wangu, musanangurwa wangu munzwei!
Izwi rese richataura nesu mukati menguva yekupedzisira rinenge riripo kutizivisa zvakanyorwa muBhaibheri. Jesu muShoko rakanyorwa. Inzwai Iye ega Shoko raMwari. Kwete umwe munhu.
“Mumazuva enzwi remutumwa wechinomwe” tinofanira kudzosera zvese zvaanotaura kuShoko, totenda kumazano anotsigirwa nekubatanidza mavhesi emuBhaibheri pamwechete kuti tizivise chokwadi.
Mazwi anotaurwa nemunhu, paanenge ataura zvakanaka, zvinonongedzera kuchokwadi. Chokwadi chinowanikwa muBhaibheri. Mutsara umwe neumwe, pasina kurwisana kweMagwaro.
ISAYA 28:13 Saka Shoko raJEHOVA richave kwavari, chirevo pamusoro pechirevo, murairo pamusoro pomurairo, apa zvishoma, napapo zvishoma; kuti vaende, vawe nenhendeshure, vavhunike, vabatwe nomusungo, vatapwe.
Hakuna nhema dzinoyanana neBhaibheri dzisingarwisi zvinoreva Shoko paimwe nzvimbo.Vanyengeri vakuru venguva yedu vaparidzi veMharidzo vanoshandisa mazwi akataurwa nevanhu kuti vasimbise zvavanotenda mazviri. Nei vasingatsigiri zvavanotenda neBhaibheri? Nekuti zvavanotaura zvakaipa, saka hazviwanikwi muBhaibheri. Vanodisisa mazano avo, vanozvikudza sezvo vachionekwa sevakangwara, saka vanobva varasa Bhaibheri.
Semuenzaniso vaparidzi “vemharidzo” vanokuudza kuti vanoziva zita idzva raJesu. Vaparidzi vakasiyana siyana vakaita “mazita matsvsa” akasiyana , saka zvinoenderana nekuti unenge uchitaura nani.
ZVAKAZARURWA 19:12 Meso ake akanga akaita somurazvo womoto, pamusoro wake pakanga panokorona zhinji; wakanga ane zita rakanyorwa risina kuzikanwa nomunhu, asi naiye bedzi.
Bhaibheri rinoti hakunomunhu unoziva zita idzva raJesu.
Saka vaparidzi “veMharidzo” vanoti vanoziva zvinonzi neBhaibheri hatizivi.
Mukuru wedu. Teererai kuBhaibheri chete, Shoko raMwari. Bhaibheri ndiro Mukuru wedu.
Mosesi naEria, vaporofita vakuru vaviri, havangambofananidzwi naJesu Kristu.
Vaparidzi “veMharidzo” vanoti zvakataurwa naWilliam Branham zvinoenderana neBhaibheri vari kunyengera vanhu uye vachin’oresa zvaakadzidzisa.
Zaruriro yechero munhu inofanira kunzverwa kubva pamavhesi eBhaibheri izvozvo zvega ndizvo zvinoita kuti zvive zvechokwadi.
Vadzidzi vatatu vepamusoro, vakasiiwa vega vaive vasina chavaitomboziva sesuwo. Zvinofungwa nevanhu hazvina zvazvinoreva. Hakuna vanhu vane mbiri pamberi paMwari.
Munyika yedu ine manhamba mune manhamba maviri chete: 1 na 0. Zvichienderana nenguva yedu yemanhamba, Jesu ndiye wekutanga (nhamba 1) vamwe vanhu vose havana zvavanoreva ndivo vana 0.
Iwe kuri nhamba ipi?
RUKA 9:36 Inzwi rakati raenda, Jesu akavonekwa ari oga. Vakanyarara vakasaudza munhu chinhu namazuva iwayo chinhu chimwe chavakanga vaona.
Izwi rakataura. Mhute ikaparara. Jesu oga ndiye akavonekwa. Hakuna munhu angafananidzwe naJesu. Iye oga ndiye anotiponesa. Kana mukanzwa inzwi remutumwa wechinomwe, ipapo muchaona Jesu oga seMukuru wenyu, achifamba nemapeji eBhaibheri pamunobatanidza mavhesi pamwechete kuti muone zaruriro yaJesu yakajeka.
Vadzidzi vatatu vepamusoro vaive vadzikisirwa kusvika parunyararo. Mazano avo aingove musuwo wakazaruka kuenda pakutadza kukuru. Vaidzidza chinhu chikuru chekuti vanofanira kuratidzira zvataurwa naJesu chete, kwete mazano avo. Ipapo pega ndipo pavaizokwanira kunyora Testamente Itsva.
Saka kereke ine mutungamiri umwechete chete: Jesu. Muponesi mumwe: Kristu. Bhuku rimwe Bhaibheri.
Musakanganwe izvi kana makatarisa munhu ane mbiri. Mukabvisa maziso enyu paBhaibheri saPetro, muchanyura mumvura dzekunyengera kwekurasisa kwemasangano ezvitendero dziri kukura nyika yedu yanhasi.
Gomba regehena rakazarurwa pazuva redu, rinoburitsa chiutsi chinomiririra mweya unonyengera wenguva dzese nomwe dzemakereke manomwe ichibatanidzwa kuti inyengere mukadzi waKristu wenguva yekupedzisira. Mweya yakachenjera, inonyengera, uye inofurira ine dzidziso dzakangwara dzakawanda (kune ndudzi zhinji dzedzidziso dzinodaidzwa kuti “Mharidzo” yenguva yekupedzisira) asi dzose dzine nzira imwe yekurwisa. Dzinokuitai kuti mubvise maziso enyu muBhaibheri. Munopedzisira musisakwanisi kutsigira zvamunotenda muchishandisa Magwaro. Ndicho chikonzero nei tichida nhowo dzekutenda. Kutenda kunouya chete nekunzwa Shoko raMwari.
Hatina kuvimbiswa William Branham achinzi “Inzwi raMwari”. Ichi chinzvimbo chisimo muBhaibheri chinopihwa hushumiri hwake. Akavimbiswa achinzi “Inzwi remutumwa wechinomwe”. Saka vakashambadza mabhuku ake ndivo vakawedzera pakurasisa vanhu uku.
Chiitiko chekubwinya kwaJesu pagomo ichi chinomiririra magumo enguva dzemakereke saka zvaive zvisina basa kuti zviudzwe maJuda emazuva iwayo sezvo zvaive zvisina zvazvaizoreva kwavari.
Munhu akavuya nemwanakomana wake aive akazadzwa nemweya yakaipa kuna Jesu.
LUKE 9:40 Ndakakumbira kuvadzidzi venyu kuti vaubudise, vakasagona.
41 Jesu akapindura akati: Haiwa! Rudzi rusingatendi, rwakatsauka; ndichagara nemi kusvikira riniko, nokukuitirai moyo murefu? Vuya pano nomwanakomana wako.
42 Wakati achivuya, mweya wakaipa ukamuwisira pasi; ukamubvundisa zvikuru. Asi Jesu wakaraira mweya wetsvina, akaporesa mwana, akamudzosera kuna baba vake.
43 Vose vakashamiswa novukuru bwaMwari. Zvino vose vakashamiswa nezvose zvaakaita; akati kuvadzidzi vake:
Jesu aive aratidzira simba zhinji. Akabva ayambira vadzidzi vake kuti aizourayiwa. Kwete nekuti aive asisina simba, asi nekuti ndicho chaive chikamu chakakosha kwazvo chezano raMwari reruponeso.
Saka zvinhu pazvinoipa tinofanira kuziva kuti Mwari ari kuita chimwe hinhu chakasiyana nezvatingaite isu.
Saka kana tikapinda mupfungwa dzaMwari, tinozoona kuti hapana chakakanganisika. Mwari aida kuti zvifambe nenzira iyoyo.
Mwari ane simba guru dzimwe nguva anorivanza kumashure kwekuneta kwehunhu hwevanhu. Asi musanyengerwe. Anenge achiziva zvaanenge achiita. Nenzira iyoyo anoita kuti Satani ararame mukufungidzira.
RUKA 9:44 Mashoko aya ngaapinde munzeve dzenyu; nokuti mwanakomana womunhu uchaiswa mumavoko avanhu.
45 Asi ivo havana kunzwisisa kutaura uku; vakanga vakuvanzirwa, kuti varege kukunzwisisa; vakatya kumubvunza pamusoro pekutaura uku.
Vadzidzi vaikwanisa kuona Jesu musimba rake rinoshamisa. Asi havana kuziva kuti paCalvari Jesu achaviga simba rake kuseri kwenyama yemunhu achirwadziswa oratidzira kukundikana kana kuneta kwemunhu.
Vadzidzi havana kana kukwanisa kufungira kuti vachaona zano raMwari richizadziswa nenzira iyi.
Messias akasangana nezviitiko zvemazuva ekupedzisira zvakasiya vanhu vose vakakahadzika. Hapana pakati pevanhu akaziva kuti chiii chaiitika paCalvari. Saka tinoyambirwa kuti paKuuya kweChipiri kwaJesu, zvinhu zvichasiyana kwazvo nezvatakatarisira isu vanhu.
Saka vanhu havana kukodzera kutungamirira kereke, nekuti isu vanhu hatizivi kuti hurongwa hwaMwari hwakavanzwa ndehwei.
Chinhu chimwe chatingaite chete kutevera Bhaibheri, torega kuita kana kutenda chero chinhu chisimo muBhaibheri.
Bhaibheri rega ndiro rinokwanisa kutiudza nhanho inotevera yatingatore.
Ruka anotaura kumwe kutadza kunotitambudza isu vanhu.
RUKA 9:46 Zvino nharo dzikamuka pakati pavo, kuti ndiyani mukuru kwavari.
Uku ndiko kumwe kwekutukwa kukuru kuri mumakereke emaKristu. Rudo rwekusimudzira munhu. Zvakadaro, rudo rwekuzvikwidziridza. ChiKristu chemakwikwi chinosimudzira mweya wekuzvikoshesa apo maKristu anoti, “ndiri mukuru kana kuti ndiri nani kupinda iwe”, iyi ndiyo mbeu yakaipa yekuzvikudza. Izvi zvinoitika zvakanyanya muvanhu vanozvitutumadza. MaKristu, vanonzwa vakakosha, vanoda kudzidzisa vamwe kuva saivo, vozviitira vanhu vanovatevera. Vanoda kuzviitira vateveri.
LUKE 9:47 Asi Jesu zvaakanga achiziva kufunga kwemoyo yavo, akatora mwana muduku, akamuisa parutivi rwake.
48 Akati kwavari: Aninani unogamuchira mwana uyu muduku muzita rangu, unondigamuchira ini, unogamuchira wakandituma; nokuti muduku kwamuri mose ndiye mukuru.
Jesu akadavira mubvunzo “Ndiyani mukuru?” nekusimudza mwana muduku. Asi mwana handiye mukuru. Saka kereke haisi kuzovakwa zvichibva “pamukuru”. Hamuna chinzvimbo ichocho mukereke. Hakuna mwana angazviti ndiye mukuru, nekuti vana vaduku vanoda kuziva uye vanobvunza mibvunzo mizhinji, nekuti vanoziva kuti vanoziva zvishoma kwazvo saka vane rudo rwekudzidza. Saka Jesu anotipa muenzaniso uyu. Ari kutiudza kuti tinoziva zvishoma kwazvo pane zvinotaurwa neBhaibheri. Tinofanira kuva nerudo rwekudzidza kukunda kudzidzisa. Pamiviri yedu tine maziso maviri nenzeve mbiri, asi muromo mumwechete, kureva kuti tinofanira kudzidza kukunda kudzidzisa kwatinoita.
Saka hatinakungwara sezvatinofunga kuti takaita. Kuzviita tiri pamusoro pane zvemweya hahuzi hunhu hwechiKristu.
Kristu anozvideredza iyeye mukuru mumaziso maMwari. Isuwo kashoma kuti tisimudzire muKristu wepasi pasi, zvichireva kuti hakuna munhu anonzi mukuru kana anosimudzirwa pahutungamiri hwemweya mukereke. Kristu oga ndiye Musoro wekereke. Tinofanira kunzwa iye ega paanotaura kupfurikidza Shoko rake, Bhaibheri. Mwari anoona munhu anozvininipisa anoteerera semukuru muShoko rake.
Apo vadzidzi ava vaikwikwidzana kuti mukuru aive ani, havana kuziva kuti mumwe wevavengi vavo mukuru, muFarise ainzi Sauro, aizova pamusoro pavo vose pakuteya nheyo dzekereke yechiKristu. Sauro aizoshandurwa zita rake odaidzwa kuti Pauro.
Zvakare, nekuda kwekurangarira pamusoro pavo ivo vega, vadzidzi vakapinda munzira yakaipa.
Ruka akabva arova zvakare pamweya wemasangano- “Kereke yangu ndiyo kereke chaiyo.”
Hakuna kana sangano rimwe rekereke rakafanira kuzviti ndiro rinonatsa.
RUKA 9:49 Johane akapindura, akati : Tenzi taona munhu achibudisa mweya yakaipa muzita renyu, tikamudzivisa, nokuti haateveri nesu.
50 Asi Jesu akati kwavari: Musamudzivisa; nokuti usingapesani nemi, unemi.
Mabasa anoshamisa acharatidzwa mumakereke mazhinji, zvisinei nekusiyana kwedzidziso dzavo. Hakuna sangano rimwe rinofanira kuzviti ndiro guru pamabasa esimba rinoshamisa.
VAROMA 11:29 Nokuti zvipo zvaMwari nokudana kwake hazvishandurwi.
Mwari haapiwi miganhu nemadziro akavakirwa kekereke kuti ive “ndiyo kereke chaiyo” kana kuti “kereke yega ine chokwadi”.
Tinofanira kuremekedza zvipo nematarenta aMwari pese patinona achibata basa.
MuKristu wega wega anofanira kubvuma kuti Mweya Mutsvene waMwari unofamba uye kubata basa kunyangwe kunze kwekereke yake.
Ruka anotikurudzira kuti tisaraire vapikisi vedu tichivaparadza.
VaSamaria havana kumugamuchira mune rimwe guta.
RUKA 9:54 Vadzidzi vake Jakobo naJohane, vakati vachizvivona, vakati: Ishe, munoda kuti titi moto uburuke kudenga, uvaparadze here?
55 Asi iye wakatendevuka, akavaraira akati hamuzivi kuti muri vomweya wakadii.
56 Nokuti mwanakomana womunhu haana kuvuya kuzoparadza upenyu hwavanhu asi kuvaponesa. Ipapo vakaenda kuneumwe musha.
Zvinhu hazvina kushanduka mukati memakore 2 000. MaKristu achiri kutsamwa kana vanhu vakasatenderana navo. MaKristu achiri kushuva kuti Mwari aparadze vapikisi vavo. Takasununguka kukakavara pamusoro pedzidziso, asi tisashuvire kuti mumwe munhu aparadzwe, zvisinei nekuti vari kukanganisa zvakadii. Kana tichifunga nenzira iyoyo tiri kukanganisa kwazvo.
Achibhishopu weCaterbury akanamata kuti Richard Dawkins, mumwe asina zvaanotenda mazviri uye anozvidza kereke paruzhinji, aponeswe kubva pahurwere. Vasina zvavanotenda mazviri vakawanda vakashamiswa nekuita kwaAchibhishopu kumumwe munhu zvekuti vakawanda vakabvunza kuti airevesa here pakunamata munamato uyu. Aingoisa mufananidzo wakanaka kwatiri tese. Kakavarai nemumwe munhu zvakanyanya, asi muratidzei ruremekedzo semunhu pakati pevanhu. Zvinorumbidzwa zvakaitwa naachibhishopu nekutiratidza kuti tingaite sei kana tasvika pazviitiko zvakaita seizvi. Totendawo kuti Richard Dawkins akapora. Munhu wese ane kodzero dzekuva nehutano.
Sekereke tinoda vanopikisa kuti vanongedzere zvatinotadza. Ipapo pega ndipo patinoshanduka. Uye kana tichitarisa kubva pamamiriro akaita pasi rino, makereke edu ese anoda kuvandudzwa. Saka totenda Mwari navose vanopikisa. Vanotiita kuti tigare takasvinura pachinzvimbo chekuti tese tinge takarara muzvitendero zvedu zvakaitwa nevanhu.
Ruka akazivisa kuti kwatiri isu vanhu, kutevera Jesu haisi nyore. Kuva muKristu hausi mubhedha wemaruva.
RUKA 9:57 Zvino vakati vachifamba munzira, mumwe munhu akati kwaari: Ndichakuteverai pose pamunoenda.
58 Jesu akati kwaari: Mhungubwe dzinemwena, neshiri dzokudenga dzinamatendere, asi Mwanakomana womunhu haana paangatsamidza musoro wake.
59 Akati kunomumwe: Nditevere. Iye akati: nditenderei henyu ndimbondoviga baba vangu.
60 Asi iye akati kwaari; Rega vakafa ngavavige vakafa vavo; asi iwe, enda undoparidza vushe bwaMwari.
61 Mumwe zve akati: Ndichakuteverai Ishe, asi munditederei henyu ndimbondowonekana navari mumba mangu.
62 Asi Jesu akati kwaari:hakunomunhu ungati kana asinoruvoko rwake pabadza, akacheukira shure, ungafanirwa novushe bwaMwari.
Tinofanira kutarisana neEvangeri pakutanga. Tingadai tisina nzvimbo yakanaka yekuti tirare. Kunyange zviitiko zvekunzwirana nemhuri dzedu pamariro kana kuonekana hazvikwanisi kutora nzvimbo yekutanga kubva pakuteerera Mwari.
Hurongwa hwaMwari hunotikukura tichienda rutivi rwatingadai isu pachedu tisina kubvira tasarudza kuenda.
Kana tikagamuchira Jesu semusoro wedu, hatina chekutaura pamusoro pekuti nzira iyi yakatinangisepi. Muviri uripo pakuteerera musoro, haukwanisi kuudza musoro kuti unoda kuitei.